Saumsung ဖုန်းနဲ. Storage ပြသနာ - .::just for share::.
Home » Knowledge » Saumsung ဖုန်းနဲ. Storage ပြသနာ
Saumsung ဖုန်းနဲ. Storage ပြသနာ
မင်္ဂလာပါဗျာ ကျွန်တော်ဒီနေ.တင်ပေးချင်တာလေးကတော့ ကျွန်တော့ဆရာတစ်ယောက် စမ်းသပ်ပြီး အောင်မြင်လို. ပြန်လည်ဝေမျှတာပဲဖြစ်ပါတယ် မသိသေးသူများအတွက်သာရည်ရွယ်ပါတယ်ဗျာ သိပြီး သားဆိုလဲကျော်သွားလိုက်ပေါ့ .....:D
ကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်အောင်မြင်ထားတာပါ Knowledge တစ်ခုအနေ နဲ.မဟုတ်ပဲ လက်တွေ.စမ်းသပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ use own risk ပါလို.ကြိုပြောပါရစေ နော်......
အချို့  samsung phone တွေက bluetooth ကူးတာ dowload ဆွဲတာတို့ကို phone storage ထဲကို သွားသိမ်းပါတယ်..ကင်မရာရိုက်ရင်လည်း phone storage ထဲသွားသိမ်းတာပဲ...setting ထဲကနေလည်း သွားချိန်လို့မရဘူးနော်...အဲဒီတော့ sd card ကို phone storage လုပ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေသွားတာပေါ့....
လုပ်နည်းကတော့ လွယ်ပါတယ်.. root explorer နဲ့ system ထဲကို သွားပြင်ပေးရမှာပါ....( need root )
root explorer > system / etc ထဲက vold.fstab ဆိုတဲ့ file ကို နည်းနည်းလေးကြာအောင်ဖွင့်ပြီး open in text editor နဲ့ ဖွင့်လိုက်ပါ.... r/o ကို r/w ပြောင်းထားရမယ်နော်...
အောက်က စာလေး2ကြောင်းကို တွေ့အောင်ရှာပါ.....
text က phone တခုနဲ့ တခု တူချင်မှတူမှာနော်...အခုဟာကတော့ huawei ထဲကပါ....သေချာရှာနော်...ဆင်တူရိုးမှားလေးတွေရှိတယ်...
အခု ကျွန်တော်တို့က mnt ရဲ့ နောက်က sdcard နဲ့ sdcard2 ကို နေရာချင်း change ပေးရမှာပါ...
" sdcard ရဲ့ နောက်မှာ2ထည့်ပြီး
sdcard2 ကို နောက်က2ဖျက်ပေးလိုက်ပါ..."
ပြီးရင် menu>save လုပ်ပြီး restart ချပေးလိုက်ပါ...reboot တက်လာရင် storage ထဲ သွားကြည့်လိုက်ပါ....sd က phone storage ပြောင်းနေမယ်နော်......
စမ်းချင်သပဆိုရင် စမ်းနိုင်ပါတယ်...use own risk လို.ပြောပြီးသားနော်... :P ပေးထားတဲ့ guide အတိုင်းလုပ်ရင်တော့ အဆင်ပြေမှာပါ......အားလုံးပဲအဆင်ပြေပါစေဗျာ
Write By Min Khant Ko
မြန်မာပြည်လူငယ်တင်ပြီးသမျှပို.စ်များ Download ဆွဲနည်းမသိပါက ဒီလင့်ကို နှိပ်ပြီးသွားဖတ်ပေးပါ
Posted by မြန်မာပြည် လူငယ်